Pachís ulator Emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ။ ကစားပါ
ချန်ပီယံလိဂ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူမျိုးဆက်များကချစ် parchis ယင်း၏ရိုးရှင်းစွာအတွက်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Parcheesi ၏သမိုင်းနှင့်သိလိုစိတ်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
Parcheesi ဆိုတာဘာလဲ 🎲
Parcheesi ၏ဂိမ်းသည်မိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်သည့်ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှေ့ ရိုးရာဂိမ်း ကလေးများနှင့်လူကြီးများကိုအိမ်၌ဖြစ်စေ၊ ပြင်ပနေရာ၌ဖြစ်စေအတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ထွက်လာသည့်နံပါတ်သည်လိုအပ်သည်ထက်ကြီး။ pawn သည်နောက်ဆုံးစတုရန်းသို့ဝင်လျှင်၊ သင်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
ကစားသမားများဖြစ်ကြသည် သူတို့ကအလှည့်ယူ အန်စာတုံးကိုလှိမ့်ရန်။
ကဒ်ကိုသူ၏အိမ်မှ (သို့) စတင်နေရာမှဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်ပါ ၀ င်သူ နံပါတ်5ရမယ် (အချို့သောနေရာများတွင်နံပါတ် 6) ။ ထိုအချိန်အထိသင်သည်ထိုစတုရန်းတွင်နေပြီးသင်၏အလှည့်ကိုဆက်ဖြတ်သန်းရမည်။
ဆဌမသည် Parcheesi ၏သန့်ရှင်းသော Grail ဖြစ်သည် အပိုင်းအစ6ရင်ပြင်တိုးနှင့်အန်စာတုံးကိုလှိမ့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင်အန်စာတုံးနှင့်အတူလှိမ့်လျှင် သုံးတန်း 6, ရွှေ့ဖို့နောက်ဆုံး pawn ဖြစ်လိမ့်မည် စတင်စတုရန်းသို့ပြန်လာခြင်းဖြင့်အပြစ်ပေးသည်, ဂိမ်းရဲ့အစမှာ pawns ရှိရာအရပ်။
Parcheesi မှာ အပိုင်း ၂ ခုထက်ပိုသောဘုတ်ပေါ်တွင်တူညီသောစတုရန်းနေရာယူထားခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။
တူညီသောစတုရန်းတွင်အပိုင်းပိုင်းနှစ်ခုရှိပါက "မျှော်စင်" သို့မဟုတ် "အတားအဆီး" တစ်ခုဖြစ်လာသည် အခြားအရောင်များ၏လမ်းဆုံကိုပိတ်ဆို့။
အတားအဆီးကို၎င်း၏ဖန်တီးသူမှသာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဒီကစားသမားက ၆ ယောက်ကိုသေပြီဆိုလျှင်သူသည်သူ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်သိမ်းကာမျှော်စင်ပေါ်ရှိအပေါင်တစ်ခုကိုရွှေ့ပြောင်းလိမ့်မည်။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်အန်စာတုံးကိုလှိမ့်ပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည့်နေရာတွင်ဆင်းသက်သွားလျှင်ဤကံဆိုးသောမိတ်ဆွေ ပြန်အစအ ဦး သွားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုပြိုင်ဘက်ကိုစားပါ"။
သမိုင်းက Parcheesi ကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်ဂိမ်းကိုအိန္ဒိယတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် လွန်ခဲ့သောအချိန်က XNUMX ရာစုအလယ်၌တည်၏။
ခေါ်ခဲ့သည် Pachisi , ကကျော်ကြားအတွက်ကစားလေ့ရှိတယ် Ajanta ဂူ ၏ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည် မဟာရပ်ရှ။
၎င်း၏ပထမ ဦး ဆုံးကိုယ်စားပြုနေသောနေသောဂူ၏ကြမ်းပြင်နှင့်နံရံပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ် ဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
သိချင်စိတ်ကယင်း၏ပန်းပုနှင့်ကြွယ်ဝသောပန်းချီကားများမှချိန်းတွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည် ဘီစီဒုတိယရာစုယနေ့တွင်ဥမင် ၃၂ ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဤဗိသုကာလက်ရာအဆောက်အအုံသည်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယကိုသွားတဲ့သူတိုင်းအတွက်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားနေရာကိုကြည့်ရမယ်။
နောက်ထပ်သိချင်စိတ်ကပုံပြင်ဟောင်းများတွင်မှတ်သားထားခြင်းကအိန္ဒိယemကရာဇ်ထက်အနည်းငယ် ပို၍ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည် Jalaluddin မိုဟာမက် Akbar Pachisi ကစားရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့် ဂိမ်း၏တိုက်ရိုက်ဗားရှင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ဘုတ်ပေါ်ရှိအပိုင်းများကိုသူ့ရင်သွေးမှအမျိုးသမီးများဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းမှာဗြိတိသျှကိုလိုနီနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့အရာအားလုံးကိုကူးယူလိုက်တာနဲ့အမျှ Pachisi သည်နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်ပထမဆုံးခြေလှမ်းများလှမ်းခဲ့သည်.
မကြာမီတွင်ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ကိုလိုနီများကဂိမ်းကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်၎င်းသည်တရားဝင်ဂိမ်း (Ludo) ဖြစ်သည်။ ၁၈၉၆ တွင်မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ လူသိများသည်မှာထိုဂိမ်းသည်“ သွားပြီ” နှင့်ခရီးစဉ်အတွင်း၊ Ludo နှင့်၎င်း၏မျိုးကွဲများသည်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာတွင်နာမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်.
ဥပမာ၊ ဂျာမနီတွင်လူဒိုကို“စိတ်မဆိုးပါနဲ့"ဆိုလိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ"သူငယ်ချင်းကအရူးမ”, ပြီးတော့ဒတ်ခ်ျ၊ Serbo-Croatian၊ ဘူဂေးရီးယား၊ ချက်၊ စလိုဗက်နှင့်ပိုလန်ဘာသာများတွင်လည်းအလားတူအမည်များရှိသည် တရုတ် ("Chine (s) e") ။
ဆွီဒင်တွင်၎င်းကိုကျော်ကြားသည်Fia"ဆိုလိုသည်မှာလက်တင်စကားလုံး fiat မှဆင်းသက်လာသောအမည်"ထိုနည်းတူ၊"။
နာမ၌ဘုံမူကွဲ "Fia-spel"(ဂိမ်း Fia) နှင့်"knuff med"(တစ် ဦး တွန်းအားပေးနှင့်အတူ FIA) ။ ဒိန်းမတ်နှင့်နော်ဝေးတွင်ထူးဆန်းစွာပင် Ludo ဟူသောအမည်ကိုသိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
မြောက်အမေရိကတွင်၎င်းကိုစပိန်နိုင်ငံ၊ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်များကဖန်တီးမူကွဲလည်းရှိပါတယ်, အဖြစ်လူသိများ တောင်းပန်ပါတယ် နှင့်ဒုက္ခ။
စပိန်မှာငါတို့အားလုံးကို Parcheesi လို့သိတယ်။
မှတ်မိရန်လွယ်ကူသောအတော်လေးရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Parcheesi ၏ဂိမ်းသည်သင့်တော်ပါသည် အားလုံးအသက်အရွယ်ကလေးများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အခြားမိသားစုဝင်များနှင့်ကစားနိုင်သည်။ အသုံးအများဆုံးမှာ ၂ မှ ၄ ယောက်ကစားသူဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကစားသည့်မျိုးကွဲများကိုလည်းတွေ့ရသည် နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောကစားသမား။ ဤကိစ္စတွင်အရောင်များကိုအစဉ်အလာအရအနီရောင်၊ အပြာ၊ အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်တို့တွင်ပေါင်းထည့်ထားသည်။
တစ် ဦး ကပြိုင်ကားဂိမ်း
ဒီအံ့ to စရာကိုလျစ်လျူရှုပြီးအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမသိတဲ့သူတွေအတွက် Parcheesi သည်ကစားသမား ၂၊ ၃ သို့မဟုတ် ၄ ယောက်ဖြင့်ကစားနိုင်သည် (ဤကိစ္စတွင် အားလုံးအတွက်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်).
Parcheesi ၏ဘုတ်သည်စတုရန်းရှိပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုစီ၏လက်သည်းအရောင်ကွဲပြားခြားနားသည် (များသောအားဖြင့်) အနီ၊ အဝါ၊ အစိမ်းနှင့်အပြာ).
ကစားသမားတစ် ဦး စီသည် ၄ ​​ခုစီပြုလုပ်ရမည်။pawns"ဒါမှမဟုတ်"မြင်းများ", ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တစ်လှည့်လည်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများမတိုင်မီနောက်ဆုံးစတုရန်းရောက်ရှိပါ။
အဖြစ်? အန်စာတုံးကစားခြင်း! ဒါကမှန်တယ်, Parcheesi ကံကောင်းခြင်း၏ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်မနည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာ။
သင်ဤဂိမ်းတွင်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုလှည့်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်ကိုသင်သေချာစွာတွေ့ပြီးဖြစ်သည် အဆိုပါငန်း၏ဂိမ်း။ ဒါ့အပြင်ကနေ နှစ်ဖက်, သို့သော်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ Parchis y ကိုဂလိုရီယာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "ကဲ့သို့သောဂန္ပုံပြင်များအားဖြင့်မှုတ်သွင်းပုရွက်ဆိတ်နှင့်နှံကောင်"ဒါမှမဟုတ်"မြေခွေးနှင့်မြေခွေး", သုံးနှစ်ကျော်ကလေးများအားဂိမ်းနှစ်ခုဖြင့်ပျော်ရွှင်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်း၏အပိုင်းပိုင်းမြင်းနဲ့တူပုံဖော်နေကြသည်။